HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Ga Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Iban Ibo Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Pendjabi Persianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tatar Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Umbundu Valencienne Xhosa Zoloa tzeltal
Mandefa taratasy maro be isan’andro, any amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah, ireo voafonja any Etazonia mba hangatahana fanampiana ara-baiboly.
Nanao fandaharana àry izahay mba hitsidihan’ny mpitory eo an-toerana sy hampianaran’izy ireo Baiboly an’ireo olona any amin’ireto toerana ireto: Fonja, hopitaly fitsaboana aretin-tsaina, fitaizana zaza maditra, ary toby fanarenana.
Mitarika fivoriana kristianina tsy tapaka any amin’ny fonja sasany ny mpitorinay. Nahatratra 32, ohatra, ny mpanatrika lahateny ho an’ny besinimaro tany amin’ny fonja iray.
Tena tsara ny vokatra azo. Voaheloka mandra-pahafatiny, ohatra, ny lehilahy iray any Indiana satria namono olona. Niezaka mafy hanova ny toetrany anefa izy ary natao batisa ka lasa Vavolombelon’i Jehovah.
Hoy ny Vavolombelona iray momba ny voafonja tany Kalifornia izay nampianariny Baiboly: “ Hitako tsara izy tamin’ny voalohany, dia hitako tsara ny fiovana nataony. Nanao ezaka be mihitsy izy mba hahafeno fepetra hatao batisa. ”
Voafonja maro no nanaiky ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly na dia fantatr’izy ireo aza fa mety hahatandindomin-doza ny ainy izany. Tsy maintsy natokan-toerana na nafindra tany amin’ny fonja hafa, ohatra, ny sasany satria niala tamin’ny andian-jiolahy nisy azy ka nila narovana.
Tena miaiky ny manam-pahefana hoe mahavita manova olona tokoa ny Baiboly. Nisy tamin’izy ireo nanolotra mari-pankasitrahana an’ireo Vavolombelona noho ny asa tsara nataon’izy ireo tany am-ponja.